djay 2 maimaimpoana voalohany ho an'ny iOS | Vaovao IPhone
Na DJ matihanina ianao na mankafy fotsiny amin'ny filalaovana turntables ao amin'ny komity en petite, dia nalalaka voalohany i djay 2 (averinay, sambany) hatramin'ny namoahana ny iOS. Ny kinova iPhone dia mitentina $ XNUMX matetika, ary ny kinova iPad matetika $ XNUMX. Fotoana tsara ahafahana misintona an'ity rindranasa ity, ary raha mieritreritra ny hanomboka eo amin'ny tontolon'ny DJ ianao dia mety izao ny fotoana hanombohana.
Fotoana iray tokony tsy tokony halainao io, na dia mbola tsy liana amin'izany aza ianao dia azonao atao ny misintona azy avy eo mamafa izany ary ho eo amin'ny lisitry ny varotrao mandrakizay izany.
Ity fampiharana DJ misongadina ity dia ahafahan'ny mpampiasa mifehy tanteraka ny famerenana amin'ny laoniny, miaraka amin'ny fanohanana anatiny ho an'ny Spotify (tsy misy an'izany) sy iTunes, ahafahan'ny mpampiasa mampiasa DJ miaraka amina hira farany na aiza na aiza misy anao. Ny hany ilainao dia ny mampifandray ny fitaovanao iOS amin'ny rafi-peo ary ny djay 2 dia hamela anao hitendry ny mozika mivantana, amin'ny fampiasana ny log mix mix anao na hamela ny app hifehy anao.
djay 2 dia mitondra andianà vokatra ampidirina amin'ny alàlan'ny default, na dia nampidirina fividianana aza izany mba hahafahana manampy bebe kokoa amin'ireo safidy ireo, manamboatra ny fombanao araka izay azo atao. Saingy ity dia iray amin'ireo fiasa marobe, mazava ho azy, djay 2 dia nanangana ny fifandraisana sy ny fahaiza-manaon'ny interface rehetra izay azo antenaina amin'ny tambajotra matihanina. Ankoatr'izay, raha aleonao ny tsy mampiasa tariby, ny fifandraisana Bluetooth sy AirPlay dia hamela anao hamela ny tenanao ho entin'ny tontolo tsy misy fifandraisana.
Mazava ho azy, ny fampiharana dia manohana ny fanaraha-maso MIDI malaza indrindra, toy ny Pioneer sy Philips ankoatry ny hafa, ny vokatry ny fifandraisan'ireo mpamorona an'ity rindrambaiko ity miaraka amin'ireo orinasan-java-maneno mozika mba hamoronana endrika manokana mifanaraka amin'ity rindranasa ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » djay 2 maimaim-poana amin'ny iOS voalohany
sambany tsia. taona vitsivitsy lasa izay dia afaka ihany koa.
Miarahaba anao Andrés. Rahoviana izany taona vitsivitsy lasa izay? Satria i djay2 mbola tsy roa taona akory, raha ny marina dia herintaona sy tapany. Raha manome vaovao izahay, azafady mba hamarino azy io na hohamarinina.
Fiarahabana sy fisaorana tamin'ny famakiana.
Omeko anao ny tantaran'ny vidin'ny «djay2» mba hahafahanao mankasitraka fa tsy maimaimpoana io: http://appshopper.com/music/djay-2
Miarahaba an'i Andrés.
Eny tokoa, tao amin'ny App of the day dia maimaim-poana izy io satria nampidina azy aho tamin'izany fotoana izany.
Ny kinova iPhone ihany no maimaim-poana tamin'ny Mey 2014, ny kinova iPad tsy.